यौनको कुरा Archives - Hamro eSansar
Tag: यौनको कुरा
February 1, 2018 adminLeaveaComment on यौन आनन्द प्राप्त गर्ने पाँच चरण (डाक्टरकाे सल्लाह)
यौन शब्दले नै मानिसमा एक खालको तरंग ल्याउने गर्छ । हरेक व्यक्तिले हरेक पलजसो कुनै न कुनै रूपमा यौनका बारेमा सोच्ने गरेको हुन्छ । तर यौनमा आनन्द भएन भने त्यो स्वार्थपूर्तिका लागि गरिने शारीरिक क्रियाकलाप मात्र हुन जान्छ । अतृप्त यौन आनन्दका लागि पुरुष र महिला दुवैको उत्तिकै सहभागिता हुनुपर्छ । दुवैले यौन सम्पर्कका बेला […]
महिनावारी हुँदा कसरी यौन सम्पर्क गर्ने ? प्रत्येक पुरुषले ख्याल गर्नु पर्ने १० प्रयोगहरु हेर्नुस् ध्यान दिनुस्
January 20, 2018 January 20, 2018 adminLeaveaComment on महिनावारी हुँदा कसरी यौन सम्पर्क गर्ने ? प्रत्येक पुरुषले ख्याल गर्नु पर्ने १० प्रयोगहरु हेर्नुस् ध्यान दिनुस्
महिनावारी हुँदा कसरी यौन सम्पर्क गर्ने ? प्रत्येक पुरुषले ख्याल गर्नु पर्ने १० प्रयोगहरु हेर्नुस् ध्यान दिनुस् महिलाहरुको शरीरमा हुने नियमित जैविक प्रक्रिया हो मासिक श्राव । तर यो विषयमा थरिथरिका विचारहरु पाइन्छन् । परम्परागत हिन्दू धार्मिक मान्यताल महिनवारीको समयलाई अछूतका रुपमा व्यवहार गर्दछ । हिन्दूहरुका अनुसार, महिनावारी हुँदा महिलाको शरीरबाट फोहोर रगत निस्किने हुँदा […]
म २३ वर्षीया युवती हुँ , यौन सम्पर्क राख्न डर लाग्छ ! अब मैले के गर्न सक्छु ? पढ्नुहोस यो कथा
January 18, 2018 adminLeaveaComment on म २३ वर्षीया युवती हुँ , यौन सम्पर्क राख्न डर लाग्छ ! अब मैले के गर्न सक्छु ? पढ्नुहोस यो कथा
म २३ वर्षीया युवती हुँ , यौन सम्पर्क राख्न डर लाग्छ ! अब मैले के गर्न सक्छु ? पढ्नुहोस यो कथा म २३ वर्षीया युवती हुँ । करिब ४ वर्ष अघि मेरो एकजना केटा साथीसँग यौनसम्पर्क भएको थियो । मलाई यौन सम्पर्क गर्न अति इच्छा हुन्छ तर मैले कसैसँग पनि यौनसम्पर्क गरेकी छैन किनभने ममा […]
सेक्स गर्न मन लाग्दा केटीहरुले के के गर्छन् ? थाहा पाउनुस्
January 18, 2018 adminLeaveaComment on सेक्स गर्न मन लाग्दा केटीहरुले के के गर्छन् ? थाहा पाउनुस्
महिलालाई बुझ्न अप्ठेरो छ यो यूनिभर्सली अक्सेप्टेड (सर्वमान्य) सत्य हो । महिला जो उसरी त हमेशा कुराकानी गर्छन्, तर जब आफ्नो भावना र इनर फिलिंग (भित्रि इच्छा) व्यक्त गर्ने कुरा गर्छन त त्यहाँ शब्दहरुको सट्टा नन भर्बल कम्यूनिकेशन अर्थात इशाराको प्रयोग गर्छन् । यस्तो बेला पुरुषका लागि यो सांकेतिक क्रियाकलाप बुझ्न गाह्रो हुन्छ । यस्तोमा […]
January 11, 2018 January 14, 2018 adminLeaveaComment on यसकारण पुरुषले खानुपर्छ अण्डाको पहेँलो भाग
पहेंलो भागमा अण्डाको सेतो भागमा भन्दा अधिक मात्रामा पौष्टिक तत्व पाइन्छ । यो विशेषगरि पुरुष स्वास्थ्यको लागी बढि फाइदाजनक मानिन्छ । यसकारण पुरुषले खानुपर्छ अण्डाको पहेंलो भाग अण्डाको पहेलो भागबाट प्राप्त हुने फस्फोरसले दातको रोगहरु लाग्न दिदैैन । यसमा पाईने हुने कपुर नामक पौष्टिक तत्वले पुरुष प्रजनन स्वाथ्यमा फाइदा पुर्याउछ । यसले आँखाको ज्योति पनि […]
नियमित सेक्स गर्ने महिलामा यस्ता परिवर्तन देखिन्छन्, जसले बनाउनेछ तपाईलाई चकित
January 5, 2018 January 5, 2018 adminLeaveaComment on नियमित सेक्स गर्ने महिलामा यस्ता परिवर्तन देखिन्छन्, जसले बनाउनेछ तपाईलाई चकित
सानो लिङ्ग भएको मानिससँग सम्पर्क गर्दा सन्तुष्टि हुन्छ कि हुँदैन ? नियमित सेक्स गर्ने महिलामा यस्ता परिवर्तन देखिन्छन् – Hamro eSansar. अन्तरापष्ट्रय मिडियाका अनुसार यो सर्वेका लागि महिलाहरुको हिपको सबै भन्दा ठुलो भाग र कमरको सबै भन्दा पातलो भागको नाप लिइयो । यसबाट के पत्ता लाग्यो भने जुन केटिहरुले एक दिनमै पटक पटक यौन सम्बन्ध […]
January 2, 2018 January 2, 2018 adminLeaveaComment on मेरो दिमागमा यौनको कुरा मात्र खेलिरहन्छ
hamro esansar. म २५ वर्षीय अविवाहित युवक हुँ । मलाई हस्तमैथुन गर्न मन लागिरहन्छ र मेरो दिमागमा यौनको कुरा मात्र खेलिरहन्छ । के यो रोग हो ? यो समस्याको हल के छ ? म चार–पाँच महिनामा एक दिन कुनै केटीसँग सेक्स गर्छु । त्यो एक रातमा चार पटक यौनसम्पर्क हुन्छ । के यो स्वास्थ्यका लागि […]